Televizyon / Ny fahitalavitra – Diyaloglar | OpenTran
Televizyon / Ny fahitalavitra – Diyaloglar
Çevirmen & Sözlük çevrimiçi Türkçe-madagaskarlı çeviri Televizyon / Ny fahitalavitra – Diyaloglar
Rober: Julia, tadiavo haingana ny fantsona faha-5.
Julia: Fa maninona? Inona no mitranga?
Rober: manomboka izao ny fandaharana amin'ny fahitalavitra tiako indrindra.
Julia: Ny fandaharana momba ny siansa sy ny teknolojia no tianao holazaina?
Rober: Ie, marina. Milaza zavatra mahaliana maro momba ny teknolojia vaovao izy ireo.
Julia: Nilaza aminao ve izy ireo fa tsy mahasalama ny mijery tele be loatra?
Rober: Mandrosoa, Betty. Aza mitondra kofehy.
Julia: Eny, tsy ho nanao izany aho raha tsy nibodo ny hany fahita lavitra tao an-trano nandritra ny roa-polo andro isan'andro.
Rober: antsasaky ny adiny fotsiny ity seho ity. Avy eo avelako hijery izay tadiavinao ianao.
Julia: Ok, atodiho.
Rober: Jereo! Miresaka ny tantaran'ny fahitalavitra ry zareo.
Julia: Izay no tokony ho fantatsika ankehitriny. Raha ny hevitro dia efa ela be talohan'ny nahaterahantsika no namoronana ny fahitalavitra.
Rober: Mazava ho azy. Miaraka amin'ny radio dia iray amin'ireo fitaovana fandefasana voalohany indrindra. Ny fahitalavitra mekanika voalohany dia amidy tamin'ny taona 1928. Ary taty aoriana, nisy ny tarika novokarina betsaka.
Julia: Eny, mainty sy fotsy ilay fahitalavitra tamin'izany. Oviana no niseho ny fahitalavitra miloko?
Rober: Raha ny fantatro dia nampiasaina be izy ireo tamin'ny faran'ny 1960.
Julia: Mbola tadidiko ny TV voalohany. Toa efa fomba taloha be izao, rehefa misy fahitalavitra nomerika, LCD, plasma an'arivony.
Rober: Marina ny anao. Izahay koa dia efa nanana horonam-peo, izay nosoloin'ny mpilalao DVD tsikelikely.
Julia: Fa maninona no mamorona fitaovana tsy ilaina be dia be ny olona?
Rober: Fa maninona no tsy ilaina? Heveriko fa samy nanamora ny fiainan'ny olona izy rehetra. Antsoina hoe fandrosoana ara-teknolojia izany. Isan-taona dia misy fitaovana vaovao natomboka teny an-tsena. Alao an-tsaina ny fomba hiainanao raha tsy misy mpanadio na mikraoba. Ireo milina mandeha ho azy ireo dia saika isaky ny trano ankehitriny.
Julia: marina ny anao. Tena mila fitaovana toy izany isika toy ny milina fanasan-damba, mikraoba, mpanasa vilia, mpanadio vacuum ao an-trano. Na izany aza, rehefa miresaka amin'ny fahitalavitra dia mieritreritra aho fa afaka miaina mora foana isika raha tsy misy izany.
Rober: miteny izany ianao satria manana solosaina. Raha tsy nanana ianao dia hijery TV matetika kokoa.
Julia: Marina izany. Mijery ny ankamaroan'ny horonantsary amin'ny solosaina findaiko aho.
Rober: Raha ny hevitro, ny solosaina dia ny fahitalavitra mitovy amin'ny fampahalalana sy fotodrafitrasa fanampiny. Izy io koa dia manana efijery ary azonao jerena izay tianao ao.
Julia: Ie, fa ankoatra izany dia mihaino mozika aho, manoratra ny enti-modiko, miresaka amin'ny namako, manitsy sary, mamaky vaovao ary mahita ny fampahalalana rehetra ilaina amin'ny Internet.
Rober: Mbola mieritreritra aho fa forona lehibe ny TVset. Raha ny marina dia maro ny fahitalavitra maoderina mamela anao hampifandray solosaina finday na fitaovana hafa aminy hahafahanao miasa amin'ny efijery lehibe kokoa.
Julia: Tsy fantatro izany.